साप्ताहिक संवाददाता , मंसिर २८, २०७४
‘हिज हाइनेस गुरु रिम्बोछे छुल्ठिम दोर्जे योन्तान (योन्जन) टुल्कु लामा रिम्बोछे’ नाम दिइएको उक्त फेसबुक पेजमा लामाले आफू बादलमाथि रहेको, नागको आशन बनाइएको र आफ्नो टाउको पछाडितिर सूर्य रहेको फोटोसप गरिएका तस्बिर प्रयोग गरेर आफू ‘भगवान् नै भएको भ्रम दिन’ समेत खोजेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
जाडो मौसमको मज्जा केमा छ?
के मज्जा भन्नु ? न जाडोको अनुभव गर्न पाइन्छ न गर्मीको । जाडोमा नि आफ्नो ज्यानले धान्न सक्नेभन्दा बाक्लो कपडा लायो, काम गर्दागर्दै गर्मी हुन्छ अनि खोलेर फाल्यो । फेरि लायो यस्तै छ विदेशमा । मज्जा त कुनै पनि मौसममा हुँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
खड्ग वेदना, मंसिर २८, २०७४
हिजो एक–अर्कालाई गालीगलौज गर्ने तिनै नेता आज एउटै टेबलमा बसेर भोज खाँदैछन्— बियर, मासु, हिस्की आदि । उनीहरू एक–अर्कासँग गला मिलाउँदै चियर्स गर्नमा व्यस्त छन् । एकजना नेता भन्छन्— के गर्ने, हामीले आपसमा गाली नगरे त भोट पनि आउँदैन । पुरा पढ्नुहोस्
‘कृ’को पोस्टर रिलिज
अनमोल केसीले अभिनय गरेको चलचित्र ‘कृ’को रोमान्टिक पोष्टर सार्वजनिक गरिएको छ । ट्रेलर सार्वजनिक गर्नु अगाडि यसको निर्माणपक्षले नायिका अदिती बुढाथोकीलाई पनि पोष्टरमा समावेश गरेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
यौन मनोविज्ञानमा बन्दै ‘मिस्टर भर्जिन’
यौन मनोविज्ञानमा आधारित चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’ बन्ने भएको छ । ‘मिस्टर भर्जिन’मा गौरब पहारी, बिजय बराल र कमलमणि नेपालले चलचित्रको केन्द्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने छन् । पुरा पढ्नुहोस्
के पढ्दैछन् सेलिब्रेटी ?
कृष्ण भट्टराई, मंसिर २८, २०७४
नेपालमा पुस्तक प्रकाशनको संख्या बढेसँगै पुस्तकप्रेमीहरू पनि बढेका छन् । हरेक महिना राम्रा लेखकका राम्रा–राम्रा पुस्तक प्रकाशित भैरहेका हुन्छन् । उपन्यासदेखि जीवनीसम्म अनि निबन्धदेखि कथासम्मका पुस्तकका आफ्नै पाठक छन् । आमपाठक झैं सेलिब्रेटीहरू पनि पुस्तक पढ्न रुचि राख्छन् । पुरा पढ्नुहोस्
लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ
डा. राजेन्द्र भद्रा, मंसिर २८, २०७४
हामीलाई थाहै छ, यौन उत्तेजनामा पुरुष रागरसको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । केही किशोरमा स्टेरोइड औषधीको दुरुपयोगका कारण टेस्टेस्टेरोन हार्मोनको मात्रा कम हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा रगतमा उक्त हार्मोनको मात्रा कति छ भनेर परिक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
प्रोफाइल पिक्चर किन हटाएको
संकलक : जीवन भट्टराई, मंसिर २८, २०७४
डेलिभरीभन्दा पहिले डाक्टर खडानन्दकी श्रीमतीसँग । डाक्टर : तपाईं डेलिभरीको समयमा बच्चाको बाउलाई छेवैमा देख्न चाहनुहुन्छ ? खडानन्दकी श्रीमती : नाइँ पर्दैन, ऊप्रति पहिलेदेखि नै मेरो बूढाले त्यसै शंका गरिरा’छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेसनल आर्ट स्कुलले मञ्चन गर्न लागेको यो नाटकको लेखन तथा निर्देशन कृष्ण उदासीले गर्दैछन् । नाटकमा ममता मञ्जुल, निश्चल विमल, एलिसा विक, कृष्ण पौडेल, पार्वती थापा, विष्णु तिमिल्सिना, कुशल अधिकारी, लक्ष्मी न्यौपाने, सोनिया खत्री तथा प्रवेश श्रेष्ठले अभिनय गरिरहेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
मूर्तिकार गोपाल कलाप्रेमी श्रेष्ठ मूर्तिकलाकारका रूपमा चर्चित छन् । उनले नारीलाई विषय बनाएर निर्माण गरेका मूर्तिहरूको प्रदर्शनी बबरमहल रिभिजिटेडस्थित सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सञ्चालन भैरहेको छ । पुरा पढ्नुहोस्